Vavaka ho an'i Saint Helena ho very fanantenana ary? Afatory ny fitiavana
Vavaka ho an'i Saint Helena Ny famoizam-po ny lehilahy iray ary tsy mamela azy io mihitsy, tsy lavitra ny fanao hoe fitiavan-tena na tsy misy dikany izany, mety ho fangatahana famoizam-po, saingy vita avy amin'ny fitiavana sy ny tokony hamerenana izany.
Betsaka no mihevitra fa fandaniam-potoana ny vavaka, fa ny marina dia ny tsy ahitan'izy ireo ny hery miasa amin'ity zavatra ity sy ny manodidina antsika.
I Saint Helena dia vehivavy tahaka ny hafa izay niaritra ny zava-tsarotra teto an-tany tamin'ny faritra maro ka izany no antony tsy misy tsara kokoa noho izy hampiakatra ny vavaka ataontsika, izay ifandraisana ao am-po, izay mangatahantsika olon-kafa hatramin'izay Fijery romantika na mpivady.
1 Vavaka ho an'i Saint Helena
1.1 Ny vavaka amin'i Saint Helena mba hamoy fo ny lehilahy iray ary tsy handao azy mihitsy
1.2 Ny vavak'i Saint Elena hieritreritra ahy sy hiantso ahy
1.3 Vavaka ho an'i Masina Helena hamatotra ny fitiavana
2 Mila mandrehitra labozia ve aho mba hivavaka?
Maro no mahafantatra azy Santa Elena na toa an'i Elena avy any Constantinople fa ny tena anarany dia Flavia Julia Helena ary vehivavy amperora avy any Roma izy izay nambara ho Masindahy Katolika, Orthodoksa ary Loterana fiangonana.
Io olo-masina io izay nitondra ny amperora ho an'izao tontolo izao izay nanome fahafahana ho an'ny olona Kristiana tao anatin'ny izay fanenjehana ara-pivavahana lava indrindra.
Elena, nolavin ny vadiny, dia niaina fiainana feno fahamasinana feno fanaintainana sy fijaliana noho ny fitiavana izay tsy nathemotra velively.
Io fampijaliana an'i Santa Elena io dia maharitra efatra ambin'ny folo taona Tany amin'ny toerana nonenany no nilaozana ary natosiny teo am-pahatongany ny vadiny faly miaraka amina vehivavy hafa ao ambany tafo iray ihany.
Maritiora izy izay lasa ohatra amin'ny tanjaka sy fanampiana ho an'ny olona maro izay mety hahita ny tenany amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany.
Ny vavaka amin'i Saint Helena mba hamoy fo ny lehilahy iray ary tsy handao azy mihitsy
Saint Helena malala, olo-malalalahy, tonga aho mangataka aminao mba hanome ahy hatsaram-panahy lehibe izany, (anaran'ny olona) aza avelao mihitsy aho, aza mijery vehivavy hafa, any am-piasana, eny an-dalana ary na aiza na aiza no mieritreretako ny tenako manokana, vatana fanahy ary fanahin'ny (...) tonga, satria miantso anao aho, manova ny Character, manana fahefana aminao aho.
Santa Elena, mahery amin'ny fitiavana, tsy manome azy fiadanan-tsaina, tsy avelany ny eritreritrao, fa ny anarako dia mampijaly azy ary tsy avelany hody irery, fa tsy hahita molotra hafa intsony aho, fa ny filan'ny nofo hafa ho an'ny iray hafa maty Vehivavy, afa-tsy miaraka amiko ihany vao mahatsiaro fahafinaretana satria aho no namatotra izany.
Oh Saint Elena, hanampy anao handresy ny fonao indray aho, hampiavonavona ny avonavonao sy ny toetranao, atsaharo ny mamorona, (...) fantaro fa ahy izany, manary faharetana raha miaraka amin'ny hafa, ny tsangan-javatra ary Ny fanantenana dia ao anatin'ny fitiavako (...).
Tianao ve ny vavaky ny herin'i Saint Helena mba hamoy fo amin'ny lehilahy iray ary tsy handao azy mihitsy?
Ny miaina ao ambanin'io firafitra io miaraka amin'ny mpiara-miasa izay tsy manome fahatsapana ara-pihetseham-po no iray amin'ireo paoma mahery vaika sy mahazatra indrindra izay miaina an-trano ankehitriny.
Ireo fifandraisana izay nifankatia sy nifankatia dia namela ilay fandriana ara-pifandraisana akaiky ka lasa toerana mangatsiaka sy tsy miorina intsony izay misy ny tsy fahazoana antoka sy ny tsy fahatokisana izay manjaka amin'ny tontolo rehetra ao an-trano, mameno ny zava-drehetra amin'ny herin'ny ratsy. Mandoto ny tontolo iainana izy ireo.
Amin'ireto tranga ireto ny vavaka dia lasa hany nandosirantsika Tao no itiavana ny vavaka any Saint Helena.
Ny vavak'i Saint Elena hieritreritra ahy sy hiantso ahy
Saint ry Saint Helena be voninahitra, fa nandeha tany Kalvary ianao ary nitondra fantsika telo.
Ny iray nomenao azy ho an'ny zanakao lahy Constantine, ny iray kosa natsipinao tao anaty ranomasina, mba ho salama ny mpiandriaka, ary ny fahatelo mitondra azy amin'ny tananao sarobidy.
Saint Elena, I (anaranao) no mangataka aminao mba omeo ahy ity fantsika fahatelo ity, mba hametrahako azy ao am-pon'ny (anaran'ilay malalanao), mba tsy hananako fandriampahalemana na fandriampahalemana raha tsy tonga miaina aho, Aza manambady ahy ary ambarao ny fitiavanao marina.
Ny hazavana manazava fanahy, manazava ny fo (anaran'ny malalanao), ka mahatadidy ahy foana, tia ahy, manompo ahy ary maniry ahy, ary izay nomeny ahy, tarihin'ny herinao ry Saint Helena, enga anie izy ho andevon'ny malalako.
Izany fiadanam-pihavanana sy firindrana izao dia tsy misy raha tsy rehefa tonga izy hiaraka amiko, ka hiara-mipetraka amiko, satria olon-tiako, tia sy miorim-paka. Mahatoky ahy toy ny alika, malemy fanahy toy ny zanak'ondry ary haingana tahaka ny iraka, izay (anaran'ny malalanao) manatona ahy haingana, tsy misy hery na hery ara-panahy afaka manakana azy.
Enga anie ny vatany, ny fanahiny sy ny fanahiny satria miantso sy manaitaitra ary manjaka aminy aho. Raha mbola tsy tonga malemy sy finiavana izy, tonga amin'ny fitiavana, ny feon'ny fieritreretany dia tsy hanome azy fiadanam-be. Raha mandainga izy, raha namadika ahy, dia avelao ny hiala tsiny fa mampijaly ahy.
(Anaran'ny malalanao) Avia satria miantso anao aho, mandidy anao aho, mba hiverenanao avy hatrany amiko (ny anaranao), amin'ny herin'i Saint Helena sy ireo anjely mpiambina antsika.
Koa ho toy izany, ary ho toy izany!
Amim-pinoana dia mahery ny vavaka rehetra ary mitovy ny vavaka ho an'i Saint Elena hieritreritra ahy sy hiantso ahy.
Ny fanaovana izany sy ny vavaka rehetra avy ao am-po no fomba tsara indrindra satria hita miharihary ireo fihetseham-po sy ny ahiahy izay itahizantsika azy ireo.
Angataho izy mba hisaintsaina ahy tsy fomba manjaka amin'ny fisainan'ny olon-kafa fa fomba iray akory izany mitazona ny firaisana ao amin'ilay fifandraisana.
Ny angovo tsara entin'ny fahatongavantsika rehefa avy mivavaka dia azo antoka fa hanatsara ny tontolo iainana.
Ny fangatahana an'i Santa Elena mba hanampy antsika mba tsy hijanonan'ny olona manokana mieritreritra momba antsika ka hatramin'ny ilàna ny injenieran'ny fomba fiasa na dia amin'ny alàlan'ny telefaona an-tariby aza dia iray amin'ireo vavaka izay matetika mivavaka ankehitriny.
Manomboka hameno ny fandriam-pahalemana ny tokantrano ary tsikelikely no manomboka ny toe-javatra izay ho valiny andrasanay.
Vavaka ho an'i Masina Helena hamatotra ny fitiavana
Oh Emperor Santa Elena, manasa anao feno finoana sy fanantenana aho, hanampy ahy ho tafarina (anaran'ilay olona) izay tiako, fantatro ny ho avy sy ny ankehitriny, miangavy anao hahita ny fiainako aho, ataovy ( ...) misaintsaina sy mahatsapa ny lesoka.
Hotahin’i Saint Elena, noho ny famindram-ponao tsy manam-petra, ampio aho hahazo alahelo maika ao am-poko, mba hamerenako ilay olona tiako, fantatrao fa madio sy malefaka ny fihetseham-poko, manalefaka ny fonao hany ka hainao ny manome lanja ny fitiavako.
Santa Elena, reny fakan-tahaka, kristiana tonga lafatra, (...) tsy olona lolom-po, mampamirapiratra ny sainy, manao azy indray, manao izay handresena ny zava-drehetra, lavitra ny fitaomana ratsy manelingelina ny sainy betsaka, diso izy dia navela Ilay olona faran'izay kely indrindra, izay miverina an-trano (...), miandry anao izahay.
Ry Saint Elena amin'ny hazo fijaliana, fantatro fa azonao atao ny manao ny zava-drehetra, tsy hanary ahy ianao, mihaino ny feoko, ny feon'ny fivavahako ary mangataka ny fangatahako.
Ity iray ity vavaka Santa Elena ny mamatotra lehilahy iray dia irahina amin'ny tranga izay eritreretin'ny iray amin'ireo olona roa voakasik'ilay fifandraisana fa handao na hanisy fisalasalana vitsivitsy izay manomboka mamotika ny fototra mafy orina ny fifandraisana mitondra tsy fahafaliana, ady, korontana ary fifandirana ao an-tokantrano. .
Izany no atao amin'ilay vavaka mampihetsi-po, ny hafa tsy mihetsika tampoka, mijanona eto amintsika fa tsy manohitra ny sitrapony fa resy lahatra fa ny fijanonana no safidy tsara indrindra ary noho izany dia manova ny hevitra hialana amin'ny trano .
Mila mandrehitra labozia ve aho mba hivavaka?
Manoro izany izahay mandrehitra labozia fotsy amin'ny fanombohana na faran'ny vavak'i Saint Helena Hanary toky sy mamehy ny fitiavana.
Ny labozia dia famantarana fankasitrahana. Misaotra an'io olo-mahery io izahay noho ny fanampiany rehetra teo amin'ny fiainanay.
Mivavaha amin'ny finoana sy be fitiavana.